ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : အကွဲမကြောက်ကြပါနဲ.၊ အကွဲကျင့်ကြပါ။ ကွဲတတ်ရင် ညီသွားကြလိမ့်မယ်
အကွဲမကြောက်ကြပါနဲ.၊ အကွဲကျင့်ကြပါ။ ကွဲတတ်ရင် ညီသွားကြလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်တို. ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်၊ အကိုကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ကိုကိုကြီး ( ၈၈ မျိုးဆက် )
ပြောဖူးခဲ့တဲ့စကားလေးပါ။ “ အကွဲမကြောက်ကြပါနဲ.၊ အကွဲကျင့်ကြပါ၊ ကွဲတတ်ရင်
ညီသွားကြပါလိမ့်မယ် “ တဲ့။
ယနေ.ကာလမှာ တိုင်းပြည်ဟာ ယခင်စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်ကို တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့
တော်လှန်ရေးကာလလား ဒါမှမဟုတ် တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထူထောင်နေတဲ့ကာလလား
ဆိုတာ အရင်ဆုံး သုံးသပ်ကြည့်ကြဖို.လိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ် တပ်မတော်ကတိုင်းပြည်အာဏာအရပ်ရပ်ကို သိမ်းလိုက်ခဲ့ပြီး၊ စစ်အာဏာရှင်
စံနစ် နောက် တပါတီစံနစ်ကိုတည်ထောင်ပြီး တစ်ပါတီအာဏာရှင်၊၁၉၈၈ ရောက်တော့
နောက်တခါ စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာတွေနဲ.ပဲ ရှင်သန်လာခဲ့ရတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။
ကျွန်တော်တို. ရှေ.ကခေတ်အဆက်ဆက်က နောင်တော်ကြီးတွေဟာလည်း အာဏာရှင်
မှန်သမျှကို အသက်၊သွေး၊ချွေးတွေ စတေးပြီး တွန်းလှန်ခဲ့ကြတယ်၊ ဘ၀တွေ အသက်တွေ
၁၉၈၈ ခုနှစ် ကျွန်တော်တို. ခေတ်မှာလည်း တိုင်းပြည်
အတွက် တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုတွေ အတွက် အသက်၊ သွေး၊ ချွေးတွေ ထပ်မံရင်းနှီးပြီး
တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို.တိုင်းပြည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၅၀) လောက် တော်လှန်ရေး
ဆိုတာနဲ.ချည်းပဲကြုံတွေ.ခဲ့ရပြီး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး တည်ဆောက်ရေးဆိုတာ
စဉ်းစားဖို. အချိန်မရှိခဲ့ပါဘူး။ တော်လှန်ရေးတွေ တိုက်ပွဲတွေချည်းသာ ကြုံခဲ့ရတာပါ။
ယနေ.ကာလမှာ တိုင်းပြည်ဟာ အသွင်အပြင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုနဲ. ချီတက်နေပြီလို.
ထင်မြင်မိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဆိုတာ
ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်၊ နောက် လူမှုအဖွဲ.အစည်းတွေ အလျှိူလျှိူပေါ်လာခဲ့ကြပြီး ပြည်သူတွေလည်း
လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးအတွင်း ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ကြားဖြတ်
ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက် အရွေးချယ်ခံပြီး အခုအချိန်မှာ လွှတ်တော်တွင်း အတိုက်အခံအင်အားစု
တစ်ခုအနေနဲ. လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကိုချီတက်နေပါတယ်။မဲအရေအတွက် နည်းပါးသော်လည်း
၈၈ မျိုးဆက်များ အပါအ၀င် လွှတ်တော်ပြင်ပ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကလည်း
လူမှုအဖွဲ.အစည်းအသွင်သဏ္ဍာန်တွေနဲ. ပြည်သူ.အသံတွေကို ကြားယောင်လာစေပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ.ခံစားခဲ့ကြရတဲ့ ဝေဒနာတွေ၊ နစ်နာမှုတွေကို ဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ကြတဲ့အပြင်၊
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ.လည်း နှစ်ပေါင်း (၅၀) လောက်အစိုးရမီဒီယာရဲ.
မုသာဝါဒ ဖော်ပြချက်နဲ.သာ ရှင်သန်နေခဲ့ရာက ပြည်သူ.မီဒီယာ( စတုတ္တမဏ္ဍျိင် )အဖြစ် ရပ်တည်
လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါတွေဟာ အပြောင်းအလဲတွေပါ လူ.အလိုနတ်မလိုက်နိုင်သလို အလွန်
ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဒီမိုကရေလူ.အဖွဲ.အစည်းတစ်ရပ် အဖြစ် မရောက်ရှိသေးပေမယ့်အတိုင်းအတာ
တစ်ခုအထိ ပွင့်လင်းမြင်သာ ပြောင်းလဲလာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်တော်တို.တစ်တွေ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက အခုလိုရေးဖို.နေနေသာသာ
စကားတောင် ကျယ်ကျယ်မပြောရဲခဲ့တဲ့ ဘ၀တွေပါ။ ပြောင်းလာတာကို ပြောင်းလာတယ်လို.
မြင်ဖို.လိုအပ်ပြီး၊ အနေအထားတစ်ခုအရ ကောင်းလာတာလေးတွေကို ကောင်းလာတယ်လို.
အခုလို အာဏာရှင်ခေတ်ဆိုးမှ လွန်ပြီး အချိန်ကာလ (၂) နှစ်အတွင်းလောက်မှာ နိုင်ငံတကာရဲ.
အထောက်အပံ အကူအညီများစွာဟာလည်း တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၊ ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ဒါကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ. ဖွံ.ဖြိုးရေးဆိုတာကို မစဉ်းစားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့
ကျွန်တော်တို.တစ်တွေ၊ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစဉ်းစားလုပ်ကိုင်
ခဲ့ကြရပါပြီ။နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေ၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားသမဂ္ဂတွေ ပေါ်လာ
နိုင်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ.အစည်း အသီးသီးတွေအတွင်းမှာသဘောထား
မတူညီမှုတွေကြောင့် ၂ ဖွဲ.၊ ၃ ဖွဲ.တွေ ကွဲခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
နိုင်ကျ့ဉ်းတွေ ၂ ဖွဲ.ကွဲတယ်၊ ကျောင်းသားတွေ ဗ.က.သ၊ တ.က.သ၊ မ.က.ဖ ဆိုပြီးကွဲတယ်၊
အလုပ်သမားတွေ ၂ဖွဲ. ၃ ဖွဲ.ကွဲတယ်၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ.တွေ၊ လူမှုရေးအဖွဲ.အစည်းတွေ
ကွဲနေကြတယ်၊ မညီညွတ်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို အမြင်မကြည်သူ တစ်ချို.တွေက
” မြန်မာတွေဒီလိုပါပဲ ၂ ယောက်ရှိရင် ၃ ဖွဲ.ကွဲတာပါပဲ “ လို. ကိုယ့်လူမျိုးကိုနိမ်ချပြောတဲ့
အဲဒီစကားနဲ. အယူအဆကို ကျွန်တော်တို.လက်မခံနိုင်ပါ။ မြန်မာတွေဟာ မညီညွတ်တတ်သူတွေ
ထစ်ခနဲရှိ ကွဲကြပြဲကြသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လူဆိုတာ ကိုယ့်အမြင်သူ.အမြင်ရှိတယ်၊ပန်းတိုင်ကို
တူတာကို တူတဲ့သူတွေ တွဲလုပ်ကြပြီး၊ မတူတာကို မတူတဲ့သူတွေတွဲလုပ်တာ၊ မကောင်းဘူးလား။
ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘေးထိုင်ဘုပြော မကောင်းပြောနေတဲ့သူတွေထက်စာရင်
ကွဲတယ်ပြောပြော၊ ခွဲတယ်ပြောပြော တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားမပါပဲ လုပ်ကိုင်
မကြာသေးခင်ကပဲ ဘဘဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ပြောတဲ့ စကားလိုပါပဲ“ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ
နွားမဟုတ်ဘူးတဲ့၊ သူတို.မှ စဉ်းစားဝေဖန်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ် “ တဲ့။
တိုင်းပြည်မှာ နှစ်ပေါင်း(၅၀) ကျော်လောက် ကာလဟာ တော်လှန်ရေး၊ ဆန်.ကျင်ရေးကာလပါ။
ယနေ.ခေတ်မှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ တိုင်းပြည်ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးကာလပါ၊ အခြေအနေနဲ.
အာဏာရှင်စံနစ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတုန်းကတော့ တဖက်ကအလွန်အင်အားကြီးနေလေတော့ ကိုယ့်အချင်းချင်းတွေ၊
ကွဲကြရင် ခွဲပြီးလုပ်ကြရင် ကိုယ့်ဘက်မှာ အင်အားချိနဲ.နိုင်မှာစိုးလို. ကွဲကြ၊ ပြဲကြရန် မကောင်းဘူးပေါ့။
တဖက်က အာဏာရှင်က ပိုပြီးဖိနိုပ်ရက်စက်နိုင်တာပေါ့။
သင်ခန်းစာယူသင့်တဲ့ အကွဲအပြဲတစ်ခုကတော့ ၁၉၈၈ လူထုဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကာလ
အတွင်း ( ဗ.က.သ ) နဲ. ( မ.က.သ ) ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ( ၂) ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းပေါ့။
၁၉၈၈ လူထုဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးဟာ ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်တပ်လှန်.ခဲ့ကြတာပါ။
လူထုကြီး တစ်ရပ်လုံးပါဝင်ပူးပေါင်းလာခဲ့ပြီးတစ်ပါတီအာဏာရှင်စံနစ် ပြိုလဲသွားခဲ့ခြင်းပါ။
ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုဆက်လက်ချီတက်နိုင်မလဲဆိုတာ ဦးဆောင်သူကျောင်းသား
လူငယ်တွေရော၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရော ညှိနှိုင်းနေကြစဉ်မှာပဲ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ (၁၈)
ရက်နေ.မှာတပ်မတော်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီး တိုင်းပြည်ဟာစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်
အဲဒီလို စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က ရုန်းထွက်ဖို.ပြန်လည်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့ ကာလမှာ ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှု
ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကြီးကို စတင်လှုံဆော် ဦးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို.ကျောင်းသားထု
အတွင်းမှာ ( ဗ.က.သ ) နဲ. ( မ.က.သ ) ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှစ်ခွဲကွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာလည်း
ခေတ်အဆက်ဆက် ကျောင်းသားပြည်သူကို သွေးခွဲသပ်လျှိအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့ အာဏာရှင်ရဲ.
ယနေ.နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်ဖြတ်ကျော်ပြီး အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ
အတူတူ အနိုပ်စက်ခံရပြီးချိန်မှာတော့ ( ဗ.က.သ ) တွေ၊ ( မ.က.သ ) တွေ မရှိကြတော့ပါဘူး
အတူတူလက်တွဲပြီး တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာ လုပ်ကိုင်နေကြပါပြီ။
အတိတ်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ကွဲခဲ့ကြပါတယ်၊ အကွဲကိုမကြာက်ပဲ ကွဲတတ်ဖို.လိုပါတယ်။
အတိတ်က အကွဲအပြဲတွေကို သင်ခန်းစာယူတတ်ဖို.လိုပါတယ်။ ဘေးပယောဂကြောင့်
ကွဲတာ ပြဲတာမျိုးမဖြစ်စေပဲ အယူအဆအတွေးအခေါ် နဲ. သဘောတရားရေးရာ မတူလို.
ခွဲပြီး တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးကို လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ. ကိုယ်တတ်စွမ်းတဲ့ဘက်က ချီတက်
ဒါပေမယ့် ယနေ.ခေတ်မှာက တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလေ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်
အကျိုးရှိအောင် လုပ်ကြ ကိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ၂ ဖွဲ.မကလို. အဖွဲ. ၁၀၀ ခွဲပြီး အသီးသီး
ကိုယ်လုပ်နိုင်တာတွေ လုပ်သွားကြရင်ကော မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလား။
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ကွဲကြ၊ ပြဲကြတာကို ကောင်းပါတယ်လို. ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့
သဘောမဟုတ်ပါ။ မြန်မာတွေဆိုတာ ၂ ယောက်ရှိရင် ၃ ဖွဲ.ကွဲတာပါပဲလို. မကောင်းမြင်သူတွေ
ပြည်သူလူထုကို စိတ်ဓါတ်ကျအောင် ပြောဆိုနေသူကို မခံနိုင်လို.ပါ။
ဒါနဲ.ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို.ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်၊ အကိုကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ကိုကိုကြီး
( ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ) ကို သူ.အမြင်လေးပြောပေးပါလို.တောင်းဆို
သူပြောတဲ့စကားက လူငယ် ကျောင်းသားမျိုးဆက်သစ်တွေ “ အကွဲမကြောက်ကြပါနဲ.၊
အကွဲကျင့်ကြပါတဲ့၊ ကွဲတတ်ရင်ညီသွားပါလိမ့်မယ် “ တဲ့။ သူကဆက်ပြောပါတယ် ယနေ.ခေတ်မှာ အဖွဲအစည်းတွေ၊ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ကွဲကြတာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ တူရာတူရာကို စုစည်း
သွားတဲ့သဘောပါတဲ့ အထက်က ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလို ကိုယ့်အမြင် သူ.အမြင်ရှိတယ်၊
ပန်းတိုင်ကို ကိုယ်သွားချင်တဲ့လမ်း၊ သူသွားချင်တဲ့လမ်းဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ ခွဲလုပ်ကြပါတဲ့။
ဒါဟာ ကွဲတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့၊ ခွဲလုပ်နေကြတာပါတဲ့။
မကွဲတတ်တဲ့သူက ကွဲမှကြောက်တယ်တဲ့၊ ဒါကြောင့် လူငယ်ကျောင်းသား မျိုးဆက်တွေအကွဲကျင့်ဖို.
လိုပါတယ်တဲ့ ကွဲတတ်ရင် တချိန်ညီဖို. အရေးကြုံလာရင် ညီသွားကြပါလိမ့်မယ်တဲ့။
တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ကြတဲ့နေရာမှာပန်းတိုင်တူသူတွေဖြစ်ဖို. အရေးအကြီးဆုံးပါတဲ့။
အဲဒီ့ ပန်းတိုင်ကို ဘယ်လမ်းကလျှောက်လျှောက်ရောက်ဖို.သာလိုတာပါတဲ့။ အမြင်မတူတာကွဲတာဟာ
မိသားစုထဲမှာရော ညီအကိုမောင်နှမအကြားမှာရော အမြင်တွေ၊ အတွေးတွေတထပ်တည်း
တူနိုင်ကြပါ့မလား။ ကွဲပြားနေမှာပါပဲ ဒါပေမယ့် မိသားစုကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးတဲ့
အချိန်မှာတော့ သူတို.တွေဟာ မိသားစုအကျိုးစီးပွားမပျက်စီးစေဖို. အတူတူကာကွယ်ကြမှာတဲ့။
အဓိကကတော့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားတိုးတက်ရေးအပေါ်သစ္စာဖောက်ပြီး ကွဲတာနဲ.
အမြင်မတူလို.ခွဲပြီးလုပ်တာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်ကြဖို.လိုပါတယ်တဲ့။
မှတ်ချက် - ယနေ.ထုတ် သမဂ္ဂဂျာနယ်တွင် ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။
ကျော်စွာ ( ဗ.က.သ )
( ကျော်စွာ- ဗ.က.သ )